MaARM-based PCs: Sei kana x86-based yatovepo? | Linux Vakapindwa muropa
Pasina nguva refu Apple yakazivisa kuti yaizorega kushandisa x86-64-yakavakirwa Intel machipisi kushandura kushandisa ARM machipisi. Izvo zvavakadaidza Apple Silicon, ayo asiri machipisi ane ARM IP cores, asi achave macores anoenderana neISA ARM, asi yakagadzirirwa naApple pachayo.
Izvo Linus Torvalds Vakati zvingave zvakanaka kuve nemichina ine simba yeARM yekusimudzira, kuitira kuti iwe ugone kuumbiridza pasina kushandisa muchinjiko-weichi chivakwa ichi. Asi zvisinei nezvose izvi, iwe unofanirwa kuziva kuti kune mamwe macomputer ane machipisi aya anopfuura Raspberry Pi. Semuenzaniso, iyo Pinebook Pro ARM, iyo inogona kutotengwa (pre-odha) ye $ 199 neLinux.
Aya malaptop ane 14.1 - IPS LCD FullHD skrini, Dual-Core ARM 1.8Ghz Cortex-A72 64-bit chip, uye Quad-Core Cortex-A53 1.4Ghz, pamwe chete ina MALI T-860 cores yeGPU yayo, 4GB LPDDR4 RAM , 64 GB eMMC 5.0 yekuchengetedza uye inoshanda sisitimu GNU / Linux. Ehe, iyo laptop ichave neWiFi, Bluetooth 5.0, USB 3.0 (A uye C), microSD slot uye odhiyo jack ...
Zvakanaka, asi ndiri kuenda kupi nezvose izvi? Zvakanaka, zvakapusa. Sezvo muchikamu chemaseva uye HPC iri kutanga kuona kuwedzera nekuwedzera kuvapo kweARM, iwe uchatozviziva izvo timu ine simba kwazvo muTop500 yakavakirwa paARM, zvinokwanisika kuti chinhu chimwe chete icho chizoitika padiki padiki muPC chikamu, zvakatonyanya neiyo wave yakatangwa neApple iyo zvirokwazvo vazhinji vachatora mukana wekuti "vawedzere" ivo pachavo. Sezvazvakaitika nePods uye nhamba ye mp3 vatambi yakabuda kubva kune mamwe mabhenji achitora mukana wefivha yezvinhu izvi ...
ARM haina chete ine zvinobatsira kujekesa maererano nesimba rekushandisa (kudyiwa kwakakosha kune zvakatipoteredza uye nekuwedzera kuzvitonga kwemabhatiri), inobatawo nzvimbo diki kwazvo yesiliconi, kuitira kuti mamwe macores pauniti nzvimbo agone kuitiswa pane nemamwe mapurani akadai x86. Izvo zvinogona kuve chinhu chakanaka izvozvi nguva yega yega patinenge tiri padyo nemuganhu wesiliconi, kudzikisa mitengo nezvibereko zvakanaka. Naizvozvo, ARM haifanire kurerutswa munguva yepakati paPC, uye RISC-V haifanire kutarisirwa, iyo inoteera mumakwara ayo kunyangwe ichiri kushomeka zvishoma kukura).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » MaARM-based PCs: Sei kana x86-based yatovepo?
Chromebook nemaARM anga aripo kwenguva yakareba.
Kunyangwe uine budiriro huru muUSA uye kuvimbika kwakanaka kwazvo kubva kuvashandisi vayo (dzokorora) mune mimwe misika, Google nevamwe vayo vakasarudza kusaomerera pane ichi chikumbiro.
Munguva pfupi yapfuura Huawei yakaburitsa ARM desktop PC neUOS (Chinese Lignux yakavakirwa paDepin) iyo, sezvo isingaendi kutengeswa kuMadokero, haina kupihwa mari yakawanda, asi zvinoita sekunge ichashongedzera hurumende yeChinese, iri kwete mashoma ekutengesa akananga uye asina kunangana.
Asi Apple, ingangoita nguva dzose isinga gadzire pfuti, kunyangwe hazvo iyo SoC ichave ine simba kwazvo kana maARM PC ayo achibuda uye munguva pfupi Samsung, iri kugadzira adreno (chirevo che radeon) navi kune nharembozha ichaburitsa vane simba, nekuti pasi rakadaro (kana pamwe handisi python).
Ndichiri kurangarira ekutanga 2000s, apo Steve Jobs paakataura kuti Macintoshes "aigona kurova chero mbongoro yePc," uye mauto eva fanboys akataura kuti vanofungidzirwa simba ravo kune PowerPC processor, uye Intel aive muvengi. Muna 2005 pakanga paine vanopfuura mumwe vakapotsa vachema neshanduro yeIntel processors, vachifungidzira kuti kwaizove kupera kweMacs, uye kuti izvozvi vanogona kuiswa pane chero PC. Kuonekana kune izvo zvinofungidzirwa zvega.
Chinhu chega chakanyatsoitika ndechekuti Apple yaive ichitengesa malaptop ayo, aine simba rakafanana rekugadzirisa, anodhura zvakapetwa kana kana katatu kana ichienzaniswa nemamwe mabrand. Chii chichaitika manje? Ko fanboys zvakare ichavhara pedyo neIntel uye nekudzokorora kuti simba re mac rinogara mune ayo 'akasarudzika' mapurosesa?
GNOME OS inoburitsa mifananidzo mitsva kune vateereri vakawandisa kuyedza